Ichilo: Kuquluswa kuqulusiwe eHlalankosi – Bayede News
by nguMenzi Jele Posted on 13 February 2020 14 February 2020
Isenzima impilo emphakathini owakhele isigodini saseNdimhlane, endaweni yaseMsebe, esifundeni saKwaMandlakazi, kwaNongoma. Sekuyophela iminyaka engama-26 iNingizimu Afrika yaba nedemokhrasi kodwa awuye eMsebe uzobona imihlola. Ingxenye yomphakathi kuleya ndawo isaqulusa emaqeleni nasemahlathini, ayinazo izindlu zangasese. Amanzi asakhiwa edamini eligcwele onoshobishobi, amadwi nomokhani. EMsebe kuqubuka izifo eziningi ezahlukene ngenxa yobunuku namanyala okuthe chithi saka kuleya ndawo. Okufike kuthele usawoti esilondeni ukuthi ngowezi-2017 uMkhandlu wesiFunda iZululand (uMasipala uNongoma ongaphansi kwawo) wacela izigidi zamarandi eMnyangweni Wezokubusa Ngokubambisana Nezobuholi BoMdabu KwaZulu-Natal ukuze kwakhiwe izindlu zangasese eMsebe. Isicelo sedluliselwa eHhovisini likaMgcinimafa zakhishwa izindodla zamarandi ezibalelwa ezigidini ukuyokwakha lezi zindlu zangasese. Uhlelo lwaqalwa kodwa aluzange luphele, izinto zokwakha, amapayipi namasaka kasimende, kwashiywa kanjalo emaqeleni nemigodi yasala ikhamisile.
Ngokophenyo, yizindlu zangasese ezimbalwa ezakhiwa. Lezo zindlu ezimbalwa zakhiwa sekuxhanyazelwa, sekuchithwa icala futhi aziphephile zingadilika noma yinini. Aziyona nengxenye ngokwesibalo yezindlu zangasese okwakufanele zakhiwe. Imali eyayihlinzekelwe ukuzakha yaphela umsebenzi ungafeziwe. Kunendawo enegama elihehayo uma ulizwa khona eMsebe, kuthiwa kuseNewtown. Leya ndawo inesixhobo samatshe, uma umphakathi waseNewtown ufuna ukuyobeka itshelentaba, usithela kuwona lawo matshe uzikhulule khona. Azikho izindlu zangasese kuleli “dolobha elisha” mbumbulu. Sekuyinto yemihla ngemihla ngisho amaxhegu, izalukazi, omame, amadoda nezingane sebeyithatha leya ndawo njengalapho umphakathi uzikhulula khona uma uxinekile. Amanye amalungu omphakathi ikakhulukazi abantu asebebadala abayiboni into embi ngalokhu ngoba yinto abakhule beyenza, itshelentaba lilahlwa noma kusiphi isiganga neqele endaweni, ikakhulukazi kulesi siqoqo samatshe. Kubantu abasha, asebefundile nasebekhanyiselwe kusinda kwehlela, yinto abangeke bayibekezelela lena ngoba bayawazi amalungelo abo.
Yikhona lokhu okwenze intsha yaqhweba iHhovisi leSishayamthetho saKwaZulu-Natal ukuba like lihambele eMsebe liyobheka le nsambatheka yento eqhubekayo laphaya. UMnu uBonginkosi Nxumalo, onguMholi woMphakathi eMsebe, uthi imiphakathi yasemakhaya ibukelwa phansi ngoba ayikayazi imugudu elandelwayo uma ingagculisekile ngokuthize. “Ukuba kusesilungwini ngabe ayenzeki yonke le nto eyenzeka lapha, ubona amadoda, abanumzane bemizi bequluse ematsheni bezikhulula khona bebukwa yizingane. Kunezinyoka eziyingozi kabi kule ndawo, kukhona abantu asebeke bagawulwa yizinyoka beyozikhulula lapha ebusuku.
Inkinga ekhona ngabantu abafika bathi bathunywe uHulumeni ukuzokwakhela imiphakathi izindlu zangasese. Esikhathini esiphambilini abantu emakhaya bebezakhela izindlu zangasese bezigubhela nemigodi. Kunele kwaba nalo Hulumeni wedemokhrasi, amaqembu nezinhlangano zepolitiki bathi uma bekhankasa, begaya amavoti, bathembise abantu ukuthi bazobakhela izindlu zangasese. Abantu-ke bese bezithela ngabandayo, bethembe ukuthi bazokwakhelwa nguHulumeni namakhansela izindlu zangasese. Uma uzakhela wena indlu yangasese emakhaya kuyabiza ngoba kuzofanele uthenge imphahla yokwakha, ukhokhele nomuntu ozokwakhela,” kukhala uNxumalo.
ElaboHlanga lixoxe namantombazane endawo abephethe amabhakede ethi ayokha amanzi edamini elisendaweni. UNks uSebenzile Mathe, uthi amanzi endaweni yaseMsebe usizi lweminyaka. “Kuneloli eliletha amanzi la endaweni nalo lifika ngezinsuku ezithile. Uma lingafikanga sikha amanzi edamini nawo awahlanzekile, yingakho ngaphambi kokuthi siwaphuze noma sipheke ngawo siqale siwafake ujikhi. Selulekwa ngabezempilo ukuthi sifake ujikhi ngoba ubulala amagciwane emanzini. Impilo isenzima kule ndawo, sibasa emaziko ngezinkuni ngoba ugesi awukho kweminye imizi. Yikho abantu uma sebeke baya emadolobheni nasemalokishini ababuye bacabange ukubuyela emakhaya ngoba kusenezindawo ezinjenga lezi,” kubalisa uNks uMathe.
UMnu uSipho “KK” Nkosi, onguSihlalo weStanding Committee on Public Account (SCOPA) eSishayamthetho saKwaZulu-Natal, nguyena obehola ithimba ebeliyohlola impilo yabantu baseMsebe. UNkosi ubenikina ikhanda engayikholwa into ayizwile nayibone ngamehlo eMsebe.
“Yihlazo le nto esiyibona lapha, abantu bakithi benzelwa phansi. Into esijabulisayo wukuthi kube khona ilungu lomphakathi eliwabonile la manyala enzeka, lahlaba umkhosi lathinta iSishayamthetho. Iningi imali eyakhishwa ngowezi-2017 ukuthi izoqala uhlelo lokwakha izindlu zangasese la eMsebe. Ezinye zalezo zindlu azikaze zakhiwe, ezinye zakhiwa zashiywa kanjalo zangaqedwa. Siyazi ukuthi ngobani abantu okufanele basichazele ukuthi lo msebenzi wokwakha izindlu zangasese eMsebe awuphelanga ngani ekubeni imali yaphuma. Uma sesiluphothulile uphenyo, sethula nombiko, kukhona abazoboshwa ngoba yimali yabakhokhintela lena esixhashazwe lapha,” kucacisa uNkosi.
Abanye abantu baseMsebe bebengazi nokuthi lidumephi ngesikathi sifike khona ngoLwesibili. Bebengakholwa bebona amalungu eSishayamthetho sasaKwaZulu-Natal, izikhulu zikaHulumeni nezintatheli, benyathela emagcekeni eMsebe Multii-Purpose Centre. Abanye abebebabona ngabantu abagcina befunda ngabo emaphephandabeni noma bebezwa bekhuluma emisakazweni.
Posted in iBayede Kuleli Sonto, S-Two